DateMyPet.com : Momba Anay
Tongasoa eto DateMyPet.com
Mampiaraka hafa toerana? Aza. Ny toerana ho an'ny biby fivoriana olona? Eny.
Ny hevitra ny DateMyPet.com nanomboka nandritra ny mandeha miaraka amin'ny alika ao amin'ny zaridainam-panjakana eo an-toerana. Toy ny mahazatra, ry namana dia hanatona antsika sy ny hevitra momba ny fomba mahafatifaty izy. Matetika izany dia hitondra any amin'ny resaka. Ireo resaka tsotra miainga amin'ny resaka causal ny tsipiriany momba ny fiainany. Tsy fantatra ary ho niresaka Ho toy ny namana taloha. Thats ny herin 'ny biby fiompy. Manome rohy iraisana, ny fahatakarana ny hoe iza moa isika.
Ny olona tatsy I hihaona amin'ny sokajin'olona ireo miainga amin'ny ela sambatra am-panambadiana ny mpivady ho tokan-tena. Na dia 'ny fiainany dia tena samy hafa, izy rehetra hizara ny fitiavana ny biby. Na toy ny biby na ny tompony 'te-ho-ho'. Raha niresaka ny tokan-tena, dia nanaitra ahy ny fomba maro ny daty sy ny fifandraisana nifarana noho ny mpiara-miasa hafa dia tsy mifanaraka amin'ny fitiavany ny biby fiompy. Isan-karazany ireo avy 'izy Nankahala ny alika ny drooling’ ny 'izy mahazaka ny saka’ ary ny malaza ho an 'izy mihevitra fa very saina aho satria mitondra azy ireo toy ny zazakely'. Rehefa tonga ny fanapahan-kevitra ny hisafidy na ny mpiara-miasa, na ny biby fiompy – izany dia tsy ho an'ny maro an'isa brainer. Ny biby fiompy nahazo.
Ka eto isika, “raha ianao no te hampiaraka aho, tsy maintsy mampiaraka ny biby”. Thats ny fiara ao ambadiky ny tranonkala ity. Raha fantatrao tanana voalohany fa ny olona iray dia biby tia, dia mety ho mora kokoa ny zavatra be dia be. Izany no rohy mahery izay azo miorina eo amin '.
DateMyPet.com Tsy toerana fotsiny mampiaraka hafa. Tiako mba ho fiaraha-monina ho an'ny manana biby fiompy. Mitady fitiavana na finamanana. Ka hiezaka izany ary lazao aminay izay hevitrao.
Raha toa ianao ka tsy nisy biby tompony, raisina tsara koa ianao. Fa tsarovy fotsiny, “…mampiaraka ny biby”.
ANJARA NY FREE >
Mpikambana : Fa fanohanana fanontaniana, mba miangavy re Good ho voninahitrareo
Mpandray anjara: Raha maniry ny hanome votoaty lahatsoratra ho an'ny toerana, dia mifandraisa aminay mpanoratra AT datemypet.com
Press Inquiries: Mba handrotsahana ny fangatahana mba hanery AT datemypet.com
naorina in 2004, Date My Pet lasa mpitarika mampiaraka toerana ho an'ny biby tokan-tena tia. Hanohy izany fitomboana ary hanompo tsara kokoa ny mpikambana, in 2014, Date My Pet niasa tamin'i Venntro Inc (vondrona haino aman-jery eran-) mba ho anisan'ny mampiaraka ny eran-tambajotra, nahatratra an-tapitrisany ny tokan-tena manerana izao tontolo izao.